France Archive - Gool FM - page 3	twitter
Julian Draxler oo jecel in Mesut Ozil uu kula soo biiro PSG
(Paris) 05 Feb 2017 Laacibka reer Jarmal ee dhawaantaan ku biiray kooxda PSG ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in Mesut Ozil uu kula soo biiro kooxda reer France.
Julian Draxler ayaa qaab ciyaareed fiican ku qaadanaya kooxdiisa PSG tan iyo markii uu ku biiray, wuxuuna dhaliyay 4-gool 6-kulan oo uu u saftay.
23 jirkaan ayaa la waydiiyay hadii uu jiro laacib Jarmal ah oo uu jeclaan lahaa inuu kula soo biiro PSG, wuxuuna ku jawaabay isaga oo la hadlayay beIN Sports:
“Laacibka kaliya ee 
Wenger oo ka hadlay xiisaha Arsenal ay u qabto saxiixa Henry-ga cusub
(London) 03 Feb 2017 Tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa ka hadlay xiisaha kooxdiisu ay u qabto weerar yahanka da’da yar ee kooxda Monaco Kylian Mbappe.
Laacib kaan oo ah 18 jir ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigaya kooxdiisa Monaco xiliciyaareed kan, waxaana si wayn u doonaya intabadan kooxaha yurub ugu wayn.
Wenger ayaa xaqiijiyay inuu sifiican ula socdo xaalada Kylian Mbappe isla markaana uu aad u garanayo, wuxuuna intaa u daray inuu meelo badan uga egyahay kabtankii hore ee Arsenal Thierry Henry.
RASMI: PSG oo amaah ku bixisay laacibkii ay 6 bilood ka hor soo iibsatay ee Jese
(Paris), 31 Jan 2017 –Kooxda Kubadda Cagta Paris Saint-Germain ee waddanka Faransiiska ayaa shaaca ka qaadday in Weeraryahankeedii Jese Rodriguez ay amaah ku siisay kooxda Las Palmas ee ka ciyaarta Horyaaka La Liga ee Spain.
Jese oo 23 jir ah ayay PSG 6 bilood ka hor uun 25 Milyan oo Euro kaga soo qaadatay kooxda Real Madrid.
Ciyaaryahan Jese ayaa kooxda Las Palmas ee ka dhisan magaallada uu ku dhashay ee Gran Canaria waxa uu amaah ahaan kula joogi doonaa illaa 30′ 
Gianluca Lapadula oo looga gacan haadinayo dhanka Marseille (Imisa ayay ku doonaysaa?)
(Marseille) 28 Jan 2017 – Sida uu dhigayo L’Equipe, Olympique Marseille ayaa kulan la qaadatay Gianluca Lapadula iyadoo u diyaar ah inay bixiso lacagta ay AC Milan laacibka ku qiimayso oo dhan €20m oo euro.
Waxaa la sheegayaa in maareeyaha ciyaareed ee Andoni Zubizarreta kulan la qaatay qannaaska AC Milan markii uu magaalada Milano u joogey wada xaajoodka Juventus oo uu ka qaatay Patrice Evra.
AC Milan ayaa la sheegayaa inay laacibka ku qiyaasto €20m iyadoo aan Marseille u diidaynin inay qaataan 
Radamel Falcao oo daaha ka qaaday sababtii uu isaga diiday u dhaqaaqida horyaalka Shiinaha
(Monaco) 28 Jan 2017 Weerar yahanka kooxda Monaco ee Radamel Falcao ayaa ka hadlay sababtii uu isaga diiday suuqaan u dhaqaaqida horyaalka shiinaha.
Radamel Falcao ayaa daaha ka qaaday inuu iska diiday ilaa 3-dalab oo ka soo gaaray dhanka kooxaha shiinaha oo lacag badan u soo bandhigay.
Falcao ayaa sheegay in xitaa kooxdiisa loo soo bandhigay dalab aysan diidi karin balse isagu uu doortay inuu iska sii joogo Monaco si uu ugula guulaysto koobab isla markaana uu dib ugu helo qaab ciyaareedkiisii hore.
Iago Aspas oo shaaciyay inuu iska diiday ku biirida PSG
(Vigo) 26 Jan 2017 Weerar yahanka kooxda Celta Vigo ee Iago Aspas ayaa iska diiday u dhaqaaqida kooxda lacagta badan ee PSG.
Kooxda PSG ayaa isku dayday inay lacago badan ku soo jiidato weerar yahankii hore ee Liverpool, balse Iago Aspas ayaa doortay inuu iska sii joogo kooxdiisa.
Tababare Unai Emery ayaa dhawr jeer isku dayay in Iago Aspas uu soo caga dhigto caasimada faransiiska, laakiin isku dayga ayaa noqday mid fashilmay.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay Celta Vigo, halkaan waa gurigayga waxaana la noolahay qoyskeyga, waxaan aad 
RASMI: Patrice Evra oo ku biiray kooxda Marseille… + SAWIRRO
(Marseille) 26 Jan 2017 – Patrice Evra ayaa ku biiray kooxda Faransiiska ka dhisan ee Marseille, isagoo ka soo tagay naadiga Juventus ee dalka Talyaaniga.
Ciyaaryahankii hore ee Manchester United ayaa kooxda ka dhisan dalkiisa hooyo ugu biiray heshiis 18 bilood ah.
Difaacii hore ee Man United ayaa kooxda Ligue 1 ka dheesha la galay heshiis ku eg ilaa xilli ciyaareedka 2017-18.
Kooxda Marseille ayaa xaqiijisay saxiixa ciyaaryahankan, kaddib markii uu ka gudbay tijaabada caafimaad, waxaana ay barteeda Twitter-ka ku soo qortay: “RASMI: 
Jese Rodriguez oo looga gacan haatinayo horyaalka ingiriiska
(Paris) 24 Jan 2017 Weerar yahanka kooxda PSG ee Jese Rodriguez ayaa looga gacan haatinayaa horyaalka ingiriiska sida ay baahisay Marca.
Jese Rodriguez ayaa lala xiriiriyay kooxda Las Palmas ee dalka Spain, laakiin madaxwaynaha kooxdaas ayaa sheegay in koox ingiriis ah ay diyaar u tahay saxiixiisa.
Warar hoose ayaa la xiriiriyay Jese Rodriguez kooxda Liverpool, si uu u buuxiyo booskii uu baneeyay Mane oo xulkiisa kala qaybgalaya koobka Afrika.
Madaxwaynaha kooxda Las Palmas ee Miguel Angel Ramirez oo la hadlay Marca ayaa yiri:
“Waxaan la hadlay wakiilka 
David Beckham oo soo booqday xarunta kooxdiisii hore ee PSG
(Paris), 23 Jan 2017 –Xidiggii hore ee Ingiriiska David Beckham ayaa saakay booqasho gaaban ku yimid xarunta naadigiisii hore ee Paris Saint-Germain, waxaana bogga Internet-ka kooxdaasi lagu soo bandhigay Beckham oo haya funaanaddiisii hore ee PSG ee lambarka 32′.
Beckham ayaa waqti gaaban kula qaatay xarunta tababarka kooxda PSG saaxiibadiisii hore ee ay isku kooxda ahaayeen Thiago Silva, Javier Pastore, Marco Verratti, Maxwell iyo Blaise Matuid waxaana tani ku soo aadaysaa ka hor kulankooda berri ay la ciyaari doonaan Bordeaux 
January 5, 2017 WEY CAABOON YIHIIN MSN: Luis Enrique oo digay kooxaha
December 31, 2016 Klopp oo daaha ka rogay arinka kaliya ee uu kala tacajabay Manchester United
December 22, 2016 Chelsea, Man United iyo Arsenal, kooxduu ku haboon yahay James Rodriguez?…(EEG 3-dan SHAX)
October 10, 2016 “Booska 5-aad ayuu kaga jiraa Messi weeraryahannadii ugu fiicnaa ee aan ka hor imid.”.
September 3, 2016 Rode Duivels oo shaqada uu diiday Louis Van Gaal
July 31, 2016 Xiddigaha ka soo jeeda Afrikada dhexe oo ku Qarwa ka cayaarista horyaalka Soomaaliya [Waraysi]
July 31, 2016 Ibrahimovic oo ugu dambeyn u muuqda mid sal dhigtay…Balse waxaa DAAHA laga rogay sababtii uu uga guuray Hotel-ka United jeceshay ee Lowry!
July 25, 2016 Rooney: Waxaan doonayaa in aan noqdo tababare
July 17, 2016 Mourinho oo diyaar u ah in uu Fabinho ka dhigo saxiixiisii afraad
July 2, 2016 FIKIRKAAGA KA DHIIBO: Yaa caawa badin kara xulalka Jarmanka iyo Talyaaniga? (Fikrikaaga idaacadda ayaa lagasii dayn doonaa?)
March 22, 2017 Gianluigi Donnarumma oo billada NxGn ku qaatay laacibka ugu wanaagsan xiddigaha soo baxaya + Sawirro
March 22, 2017 TOOS u daawo: Germany vs England – LIVE (Shaxda sugan)
March 22, 2017 ”Inaan dib ugu soo laabto xulka Spain waxaa mahaddeeda iska leh AC Milan” – Gerard Deulofeu
March 22, 2017 Liverpool oo €35m oo euro ku raadinaysa Ivan Perisic
March 22, 2017 Man City oo lacag dhan €120-150m ku raadinaysa goolwalaha AC Milan ee Gianluigi Donnarumma
March 22, 2017 Angel Di Maria oo ku fikiraya inuu dib ugu laabto Real Madrid
March 22, 2017 XOG: Inter Milan oo qarka u saaran inay soo qaadato Kostas Manolas
March 22, 2017 Barcelona oo qorshaynaysa inay si bilaash ah ku hesho laacib ka tirsan Real Madrid
March 22, 2017 LA ISKULAMA SALAAMIN: Kulankii Lega Serie A oo ay ka bexeen lixda kooxood ee ugu waawayn Talyaaniga!
March 22, 2017 NIKE vs ADIDAS: Ronaldo vs Messi….(Xiddigaha xayaysiinta u sameysa labada shirkadood oo shax laga sameeyay, Midee adag??)